မြန်မာငွေရှားပါးမှု ပြဿနာ တကယ်ဖြစ်လာနိုင်မလား | BurmeseAsia
Home News မြန်မာငွေရှားပါးမှု ပြဿနာ တကယ်ဖြစ်လာနိုင်မလား
မြန်မာငွေရှားပါးမှု ပြဿနာ တကယ်ဖြစ်လာနိုင်မလား
မြန်မာငွေ ရှားပါးမှု ပြဿနာ တကယ်ဖြစ်လာနိုင်မလား ( အခုလိုအချိန်မှာ လူတိုင်းသိထားသင့်တာမို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….)
တစ်နေ.က ရွှေကိုင်မလား ဒေါ်လာကိုင်မလားဆိုတဲ့ပို.စ် ရေးလိုက်တော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က သူ. အတွေ.အကြုံတွေ လာပြောပြပါတယ်။
ခင်ညွန်.လက်ထက်ကတည်းက နိုင်ငံခြားငွေ စီမံချက်ရှိပါတယ်တဲ့။ နိုင်ငံခြားက ငွေလွှဲအများစုဟာ သူတို.လူတွေပါတဲ့။ စလုံး၊ ထိုင်း၊ တရုတ်နဲ. မလေးက ငွေတွေကို နောက်ကွယ်ကနေ သူတို.ဒိုင်ခံ မြန်မာငွေလဲပေးနေတာတဲ့။
အရင် NLD အစိုးရခေတ်ကတည်းကိုက မအလတို.ဆီမှာ ရွှေက တန်ချိန်ကို ထောင်ချီရှိတာပါတဲ့။ ထိုင်းအစိုးရနဲ. နွယ်တဲ့ ဘဏ်တစ်ခုတည်းမှာကို တန်ချိန် ၂၀၀၀ ရှိပါတယ်တဲ့။
စစ်တပ်ထဲက စီးပွားရေး တာဝန်ခံတွေကိုယ်တိုင် တရုတ်ပြည်မှာ ရောင်းဖို. ကိုဗစ် မဖြစ်ခင် တစ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကတည်းက ရောင်းဖို. အစီအစဉ်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့။
ရေနံ၊ ဓာတ်ငွေ.၊ ကျောက်မျက်၊ သစ် နဲ. သံယဇာတတွေ ရောင်းတဲ့ လမ်းကြောင်းသာမက တခြား တရားဝင် မဝင် လမ်းကြောင်းတွေက ဖန်တီးထားပြီးသားပါတဲ့။
အထက်က သတင်းကို မိတ်ဆွေတို. ဆွေးနွေးပြီး အတည်ပြုပေးဖို. တောင်းဆိုလိုပါတယ်။
ကျနော်တခြားနေရာတွေကနေ ကြားဖူးတာက မြန်မာငွေထက် ဒေါ်လာ နဲ. ရွှေတွေကိုပဲ မအလ နဲ. စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်းက စုထားတာပါတဲ့။ သူတို. ကိုယ်တိုင်လည်း မြန်မာငွေကို တန်ဖိုး မထားခဲ့မိတဲ့ပုံ ပေါ်ပါတယ်။
ဒီသတင်းတွေသာ မှန်ရင်တော့ မြန်မာငွေရှားပါးမှုဟာ ဖြစ်လာနိုင်ဖို. ရာခိုင်နှုန်း များလာပြီ လို. ထင်မြင်မိပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို.၊ ရွှေဈေး၊ ဒေါ်လာဈေးကို ဖျက်ဖို. ရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ သက်ဆိုင်သူများ နားလည်ပေးကြပါ။ မြန်မာငွေ စုတာ၊ မစုတာကတော့ ကံယာကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်ပဲ ဆုံးဖြတ်ကြပါ။
မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်မက လာပြောပြချက်အရတော့ ရွှေတန်ချိန် ထောင်ချီဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။
ရာချီတောင်ဖြစ်နိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးကွန်ဖန်းပေးကြပါ။
ထိုင်းဖက်က ငွေလွှဲတွေကတော့ အရင်ကတော့ မသိဘူး အခုကတော့ မအလတို. လုပ်ဖို. မလွယ်ပါဘူးတဲ့ခင်ဗျာ။ သိသူများ ဆက်ပြီး ကွန်ဖန်းပေးကြပါ။
CRD_Kyaw Kyaw Lin
မွနျမာငှေ ရှားပါးမှု ပွဿနာ တကယျဖွဈလာနိုငျမလား ( အခုလိုအခြိနျမှာ လူတိုငျးသိထားသငျ့တာမို့ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ….)
တဈနေ.က ရှကေိုငျမလား ဒျေါလာကိုငျမလားဆိုတဲ့ပို.ဈ ရေးလိုကျတော့ မိတျဆှတေဈယောကျက သူ. အတှေ.အကွုံတှေ လာပွောပွပါတယျ။
ခငျညှနျ.လကျထကျကတညျးက နိုငျငံခွားငှေ စီမံခကျြရှိပါတယျတဲ့။ နိုငျငံခွားက ငှလှေဲအမြားစုဟာ သူတို.လူတှပေါတဲ့။ စလုံး၊ ထိုငျး၊ တရုတျနဲ. မလေးက ငှတှေကေို နောကျကှယျကနေ သူတို.ဒိုငျခံ မွနျမာငှလေဲပေးနတောတဲ့။
အရငျ NLD အစိုးရခတျေကတညျးကိုက မအလတို.ဆီမှာ ရှကေ တနျခြိနျကို ထောငျခြီရှိတာပါတဲ့။ ထိုငျးအစိုးရနဲ. နှယျတဲ့ ဘဏျတဈခုတညျးမှာကို တနျခြိနျ ၂၀၀၀ ရှိပါတယျတဲ့။
စဈတပျထဲက စီးပှားရေး တာဝနျခံတှကေိုယျတိုငျ တရုတျပွညျမှာ ရောငျးဖို. ကိုဗဈ မဖွဈခငျ တဈနှဈဝနျးကငျြလောကျကတညျးက ရောငျးဖို. အစီအစဉျရှိခဲ့ဖူးပါတယျတဲ့။
ရနေံ၊ ဓာတျငှေ.၊ ကြောကျမကျြ၊ သဈ နဲ. သံယဇာတတှေ ရောငျးတဲ့ လမျးကွောငျးသာမက တခွား တရားဝငျ မဝငျ လမျးကွောငျးတှကေ ဖနျတီးထားပွီးသားပါတဲ့။
အထကျက သတငျးကို မိတျဆှတေို. ဆှေးနှေးပွီး အတညျပွုပေးဖို. တောငျးဆိုလိုပါတယျ။
ကနြျောတခွားနရောတှကေနေ ကွားဖူးတာက မွနျမာငှထေကျ ဒျေါလာ နဲ. ရှတှေကေိုပဲ မအလ နဲ. စဈတပျအသိုငျးအဝိုငျးက စုထားတာပါတဲ့။ သူတို. ကိုယျတိုငျလညျး မွနျမာငှကေို တနျဖိုး မထားခဲ့မိတဲ့ပုံ ပျေါပါတယျ။
ဒီသတငျးတှသော မှနျရငျတော့ မွနျမာငှရှေားပါးမှုဟာ ဖွဈလာနိုငျဖို. ရာခိုငျနှုနျး မြားလာပွီ လို. ထငျမွငျမိပါတယျ။ ဒီလိုပွောလို.၊ ရှဈေေး၊ ဒျေါလာဈေးကို ဖကျြဖို. ရညျရှယျတာ မဟုတျဘူးဆိုတာတော့ သကျဆိုငျသူမြား နားလညျပေးကွပါ။ မွနျမာငှေ စုတာ၊ မစုတာကတော့ ကံယာကံရှငျတှကေိုယျတိုငျပဲ ဆုံးဖွတျကွပါ။
မိတျဆှေ တဈယောကျမက လာပွောပွခကျြအရတော့ ရှတေနျခြိနျ ထောငျခြီဆိုတာ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ ယူဆပါတယျ။
ရာခြီတောငျဖွဈနိုငျဖို့ မလှယျဘူး ထငျပါတယျ။ ဆကျပွီးကှနျဖနျးပေးကွပါ။
ထိုငျးဖကျက ငှလှေဲတှကေတော့ အရငျကတော့ မသိဘူး အခုကတော့ မအလတို. လုပျဖို. မလှယျပါဘူးတဲ့ခငျဗြာ။ သိသူမြား ဆကျပွီး ကှနျဖနျးပေးကွပါ။
Previous articleနှလုံးသားထဲမှာ မြန်မာအတွက် နေရာအလွတ် အမြဲရှိပြီးသား လို့ဆိုကာ လွမ်းနေကြောင်း ပြောလာတဲ့ Sinon
Next articleထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်နေရတာမို့ မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူမရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို အရမ်းသတိရနေတဲ့အကြောင်းရင်ဖွင့်လာတဲ့ အေးမြတ်သူ